Wholesale Dziviriro Masiki, Mhepo Inofukidza Mask Vagadziri & Vatengesi | Nyeredzi Bhuruu
Iyo kambani ndeyekunze-yakabhadharwa bhizinesi inoshanda mukugadzirwa kwemasikisi ekudzivirira.
Mask Uye Anofema
Civil Giredhi Ppe Chiso Mask Kufuridzira
Kugadzirwa kwakanaka kwezvakakosha zvinhu
Iyo Blue Star brand guruva-proof, deodorant uye anti-microtoxic chipanje masikisi ekudzivirira uye ekotoni akateedzana masks ekudzivirira anogadzirwa nekambani anogadzirwa neakasarudzika zvigadzirwa, inorema dziviriro, yakanaka uye yakasimba.
Iyo Blue Star brand guruva-chiratidzo, inonhuhwirira uye anti-microtoxic chipanji masikisi ekudzivirira uye ekotoni masiki ekudzivirira anogadzirwa nekambani anogadzirwa neakasarudzika zvigadzirwa, inorema dziviriro, yakanaka uye yakasimba; mweya wekufema kumeso, inoraswa isina-yakarukwa machira ndege, matatu-e-dziviriro masiki ekudzivirira, Butterfly masks, KN95, mukombe-wakaumbwa masiki akateedzana masiki, emitambo akateedzana masiki, inotonhora-chiratidzo akateedzana masiki, akajeka masiki uye mamwe ekurapa masiki; pakati pavo, vana-mativi-masiki evana akagadzirwa zvishoma uye iwo mavara anosarudzika.
3 Dzoka Chiremba masiki
> Zvigadzirwa zvekutanga zvinoshandiswa muBlue Star machira, rabara kana epurasitiki yakakwira. Kusarudzwa kunoenderana nekushandiswa, semuenzaniso, mukati kana kunze. Mamiriro ekunzewo anoita basa rakakosha senzvimbo dzine hunyoro hwakanyanya uye hunyoro. Yedu yakaoma QC uye manejimendi sisitimu inogona kuona yepamusoro mhando ye. Iko kushandiswa kwechigadzirwa ichi kunobatsira vanhu kudzikisa maawa avo ekushanda uye kunobatsira kuvasunungura pamabasa anonetesa uye mabasa anorema.
KN95 / FFP2 Disposable Mhinduro
Utatu-hwakakora hwemhino clip clip 95
Masiki ekudzivirira ekudzivirira
Mas95 Ichi chigadzirwa chinokwezva kutarisisa neakanyanya kupisa kupisa dissipation kuita. Iine yakavakirwa-mukati yazvino kutonhora sisitimu, ine yakakwana mweya yekufema kwenguva refu-kwenguva basa. Kusarudzika kwakasiyana kwechigadzirwa ichi kunoguma mumucheka wakasviba une mitsetse mutete uye chimiro chakatsiga chinogara kwenguva refu uye chakapfava pane zvekurara pamubhedha. Kusarudzwa kwezvinhu zveBlue Star kunoenderana. Izvo zvinotora mupfungwa zvivakwa zvemuviri (density, melting point, elec / thermine zvivakwa, nezvimwewo) uye mehende zvinhu (kuomarara, kushomeka, kupurasitiki, nezvimwewo).
Iyo kambani ine ISO9001 yemhando yepamusoro manejimendi sisitimu, yakasarudzika yevashandi yekuchengetedza michina yekugadzira rezinesi, yakakosha yekuchengetedza vashandi michina yekuchengetedza chiratidzo. Rezinesi rekugadzira zvigadzirwa FDA, CE certification, yakanyorwa pane chena runyorwa rwe Ministry of Commerce, Kunze Certification uye Kunyoreswa Kwekurapa Kunze uye Export Association.
Kwemakore anopfuura makumi mashanu, anga ari iye akatanga iyo indasitiri yemasikisi muFujian. Muvambi haana kumbokanganwa chinangwa chake chepakutanga, akarangarira basa rake, akatungamira vanhu veBlue Star kuti vaende kumberi, uye achiedza kuchengetedza hupenyu hwevanhu vanoshanda kumberi. Muna 2020, denda mamiriro akangoerekana arova. Vanhu veBlue Star havana kukanganwa mamiriro echirwere uye vanhu vane hutsinye vane rudo. Mukupindura mutemo wehurumende wekutangazve basa pazuva rekutanga regore, vakave mabhizimusi akakosha ekutenga nekuchengetedza eState Council.
Raira kubva kuMalaysia
Order kubva kuMalaysia: kopuru-yakatetepa shavishavi, ine mhuno clip, yakagadziriswa meltblown jira, pamwe nano zvishandiso, zvine yakakosha mabasa. Iyo yega yakarongedzwa mune yekurapa mapepa-epurasitiki mabhegi, ayo ari epamusoro-magumo mhepo.
Iyo Czech emergency emergency inoshongedzwa neNafu masks
YeCzech emergency centre yakarongedzwa neNafu masks
Xiamen Blue Star Enterprise Co, Ltd. yakavambwa muna 1987.
Kuvimba neChina Pharmaceutical University, Fujian Medical University uye Qilu Medical College yeShandong University, iro bhizinesi rakabatana rakamisa nzvimbo yesainzi uye tekinoroji yekutsvagisa nzvimbo muXiang'an Dunhu kuti iite yekuvandudza kwemaindasitiri uye nekuwedzera iyo bhizinesi yechigadzirwa mutsara kubva kumasikisi ekudzivirira, kutanga- kirasi uye yechipiri-kirasi ekurapa ekushandisa kune echitatu-kirasi yekurapa Medical uye denda rekudzivirira zvinhu senge zviridzwa uye zvinoshandiswa, kugadzira iyo yekugadzira chikuva yezvokurapa mudziyo zvinoshandiswa.